तेस्रो विश्वयुद्ध कोरोना
विश्वब्यापी रूपमा तिब्रगतिले फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ ले थ्रुपै बिकसित मुलुकहरुको आर्थिक तथा मानवीय क्षतिले तनाबको अवस्था सृजना गरेको छ। चीन, अमेरिका, इटली, बेलायत, पोर्चुगाल लगायत देशहरुको जीवनस्तर तहस–नहस पारेपनि दक्षिण एसिया क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परेको छैन।
यी क्षेत्रका सरकारहरुले कोरोना महामारी रोकथामका लागि धेरै ठूला उपायहरू शुरू गरेका छन्। कोरोनाको सावधानी अपनाउन नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स लगायतका देशहरुले राम्रो संयन्त्र बनाइरहेका छन्।
कोरोना बारेमा जान्न निकै जरुरी छ। यो भाइरस तपाईहाम्रो दैनिक हुने जीवनयापनसँग सम्बन्धित छ, जसको संक्रमण चिसो र सासको समस्याबाट हुने बैज्ञानिकहरुले बताएका छन्। भाइरसको संक्रमण चीनको वुहान शहरबाट शुरू भएको सबैमा प्रष्ट नै छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ज्वरो, खोकी,सार्स , टाउको दुखाइ कोरोनाका मुख्य लक्षणहरू हुन्।
अहिलेसम्म कुनै पनि खोप भाइरस फैलिनबाट रोक्नको लागि बनेको छैन, यदपि अमेरिकाले भने परीक्षण गर्ने काम सुरु गरेको छ। वास्तवमा कोरोना एक व्यक्तिबाट अर्कोमा फैलिन्छ। त्यसैले यसको बारेमा धेरै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ।
यसो हेर्दा कोरोनाले तेस्रो विश्व युद्धको परिकल्पना जस्तै माहोल पारेको आभास हुन थालेको छ। विश्वका सबै देशहरु कोरोनाको संक्रमणकालबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाँउन जनचेतना जारी गर्दै छन्। एन्टीडोज खोप तयार पार्न वैज्ञानिकहरु हरेक दिन सुनौलो प्रयोग गरिरहेका छन्।
मेरो देशका नेताहरू जब–जब सामाजिक सञ्जालको आक्रोस सुरु हुन्छ, तब मात्रै बिबेकहिन काम बाहेक दिर्घकालिन काम गरेको देखिदैन। सरकारले देश वा प्रदेशमा कतैपनि अनलाइन मार्फत भएपनि जनजागरणका कार्यक्रमहरु गरेको छैन। दिल्ली दूतावास त झन् भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको सहजताका लागि होइन कि जस्तो पनि लाग्छ।
नेपाल सरकार र नेपाली दूतावासले प्रवासी नेपाली जनतालाई पटक–पटक कोरोनाबाट बच्ने वा सरकार साथमै रहेको जानकारी दिनुपर्ने हो, तर त्यसो गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो समयमा प्रवासमा अत्तालिएका नेपालीहरु हतास–हतासमा गाउँ फर्कने मनस्थिति बनाएका छन्। उनीहरुलाई यात्रामा पर्ने कठिनाइका बारेमा दिल्ली दूतावास अचेत अवस्थामा छ।
देशमा बल्ल–तल्ल सरकारले विद्यालय, कलेज, सिनेमा हल, गार्डेन, हाटबजार र सुरु हुन थालेका केही परिक्षाहरुको स्थगन गरेर सकारात्मक कदम देखाएको छ।
नेपाली जनता बसोबास गरेका देशसँग आफ्ना नागरिकहरुको पछिल्ला अवस्थाका बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने हो। संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले संयुत्त रुपमा विश्व समुदायलाई पुरानै लयमा ल्याउन अनेक प्रयास जारी राखिरहेका छन्। योसँगै भारतीय सरकार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत मात्रै नभएर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरुका नागरिकहरुको चिन्ता र साचोसँगै सार्क स्तरिय भिडियो बैंठक पनि आयोजना गरेको कार्यप्रति उच्च सम्मान छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्तावलाई सहजै ममन गरेर, नेपाली जनताको बारेमा समेत दिर्घकालिन स्वास्थ्य उपचारको लागि खटेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि प्रशंसासँगै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण भारतमा बढ्दो छ। यसैबीच कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिन महाराष्ट्र सरकारले भारतमा ठूला शहरहरू मुम्बईसहित, पुणे, पिपरी, चिन्चवड र नागपुर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। महाराष्ट्र सरकारले राज्य ठुला शहरहरु ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको छ।
दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने बैंक, मेडिकल, खाद्य स्टोर, दूध केन्द्र आदि बाहेक सबै बजार पसल आगामी ३१ मार्च सम्म बन्द गर्ने महाराष्ट्र सरकारले निर्णय गरेको छ। यसअघि महाराष्ट्रका स्वास्थ्य मन्त्री राजेश टोपेले पनि आवश्यक परे मुम्बई पुरै लकडाउन गर्ने बताएका थिए। टोपेका अनुसार विदेश यात्राबाट फर्किएका ४० जना कोरोना संक्रमित पाइएको भन्दै जुनसुकै बेला आवश्यक कदम उठाउने बताएका थिए। भारतमा अहिलेसम्म ५ जनाको ज्यान जानुका साथै २०६ जना संक्रमित भेटिएका छन्।
महाराष्ट्रमा मात्रै ५२ जना संक्रमित भेटिएका छन्। कोरोना रोगले मानव चेतनामा ठूलो आगो ल्याएको छ। मानिस जसले सभ्यताको यात्रामा सबै अवरोधहरू नष्ट गरिरहेको छ। यसको बिरूद्ध संरक्षण गर्ने खोपहरूको खोजी पनि तीव्र बनाएको छ। वैज्ञानिकहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन्।
कोरोना भाइरस फैलिनुमा चीनको सबैभन्दा ठूलो दोष देखिन्छ। उसले वुहान शहर वरिपरि गरेका आणबिक परीक्षणको गतिबिधिले गर्दा, भाइरस जस्तो महामारीको फैलियो र दुनियाँलाई रुवायो। हुनत, चीनले अमेरिकी सेनाको नाममा भाइरस फैलाएको आरोप थुपार्दैमा उ अछुतो हुँदैन। यसकारण पनि शक्तिराष्ट्रहरुका यस्ता अनेकन हर्कतहरुले विश्वमा यस्ता महामारीहरुबाट जोगिन निकै गाह्रो पर्नेछ।
प्रकाशित मिति: Mar 21, 2020 08:48:55
के हाम्रो देश ‘पशुपतिनाथको कृपा’ ले मात्र चलेको हो?
कोरोना पछिको नेपाल
अमेरिकाबाट के लेख्न सकिन्छ र 'प्रिय खबर' ?
काेराेना राेकथाम गर्न राज्य गम्भीर र जिम्मेवार देखिएन